काठमाडौं फर्कियो बाबरी युनिट : RajdhaniDaily.com - काठमाडौं
Home Not-to-be-missed काठमाडौं फर्कियो बाबरी युनिट
काठमाडौं फर्कियो बाबरी युनिट
काठमाडौं । चलचित्र बाबरीको केही छायांकन भारतको सिक्किममा गर्ने तयारी हुँदै थियो । तर, नेपाल भारत सीमा बन्द गरेका कारण आफूहरू छायांकनका लागि सिक्किम जान नसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । आफूहरूलाई पूर्वी नेपालको सीमाबाट सिक्किम जान रोक लगाएपछि चलिचत्रको युनिट काठमाडौं फर्किएको निर्माण पक्षको भनाइ छ ।
यो चलचित्रको गत महिनाबाट पूर्वका विभिन्न स्थानमा छायांकन भइरहेको थियो । नेपालमा यो चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन सम्पन्न गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । अब केही प्रतिशत छायांकन नेपाल भारतको सीमा खुलेपछि सिक्किममा गरिने भएको छ ।
यो चलचित्रमा अभिनेता धिरज मगर र अभिनेत्री अदिती बुढाथोकी मुख्य भूमिकामा छन् । अदितीले चलचित्र कृबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी हुन् । केही समयदेखि उनी भारतमा विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गर्दै थिइन् । यो नयाँ चलचित्र आफ्नो होम प्रोडक्सनमा निर्माण हुने भएपछि उनी यसमा नायिका भएकी हुन् ।
चलचित्र बाबरीमा धिरज र अदितीसँगै धिरज टोटलानीको पनि मुख्य भूमिका छ । अग्रज अभिनेत्री तृप्ती नाडकरका छोरा धिरज टोटलानी हुन् । यसरी यो फिल्ममा धिरज मगर र धिरज टोटलानी गरी दुई जना नायक रहेका छन् ।
यो चलचित्रलाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गर्दै छन् । फिल्मको निर्माता पुष्पा बुढाथोकी हुन् । निर्माता पुष्पा अभिनेत्री अदितीकी आमा हुन् । उनले बाबरीको नेपालमा गर्नुपर्ने छायांकन आफूहरूले पूरा गरेको बताएकी छन् । मोरङको लेटाङसहित विभिन्न स्थानमा यसको छायांकन गरिएको पनि उनले जानकारी गराएकी छन् । अब बाँकी छायांकन सिक्किममा गर्नुपर्ने भएकाले भारतको सीमा खुलेपछि आफूहरू सिक्किम जाने उनले बताएकी छन् । यसरी नेपालको सबै छायांकन सकेर फिल्म युनिट काठमाडौं आइपुगेको पनि पुष्पाले जानकारी गराइन् ।
चलचित्र बाबरीमा एन्जिला खत्रीको कोरियोग्राफी, कालीप्रसाद बाँस्कोटा, अनमोल गुरुङ र सुजन चापागाईंको संगीत रहेको छ । चलचित्रको छायांकारमा नरेन्द्र मैनाली रहेका छन् ।
सर्लाही । सर्लाहीका एक पुरुषले सिलौटोले टाउकोमा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. २ नवलपुर पुनर्बास घर भई...
काठमाडौं । सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म झन्डै ४ अर्ब लिटर अक्सिजन खपत अनुमान गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६० हजार ३५...
जिपको ठक्करबाट सहायक प्रहरी निरीक्षकको मृत्यु
काठमाडौं । काभ्रेको बनेपामा जिपको ठक्करबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु भएको छ । बनेपा नगरपालिका–१३ स्थित सडकमा बा.१९ च १३२३ नम्बरको जिपले शुक्रबार दिउँसो...
यस्ताे छ आज सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - June 19, 2020 0
काठमाडाै‌ं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बजेटरी सहयोगका रुपमा प्रस्तावित १० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १२ अर्ब) बराबरको...
विदेश राजधानी समाचारदाता - November 2, 2020 0
राजधानीकर्मी चौलागाईसहित तीन पत्रकारलाई सम्मान
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - January 25, 2021 0
दोलखा । भीमेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो २५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा ३ जना पत्रकारलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ । नगरको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह...
शिवरात्रिको डोरीले गयो बालकको ज्यान
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 21, 2020 0
दोलखा । शिवरात्रि मनाउनका लागि डोरी टाँगेर सहयोग माग्दै गरेका एक बालकको मृत्यु भएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिका ९ सुन्द्रावतीका ९ वर्षीय पुजन थामीको...
कोरोनाविरुद्ध सामूहिक लडाइँ जरुरी
बिचार राजधानी समाचारदाता - November 2, 2020 0
कोरोना महामारी आफैंमा चरण र प्रतिचरण गरी घुम्दै र अर्को संक्रमणकारी स्वरूपमा देखापर्दै गरेपछि विश्व त्राहिमाम बन्न गएको छ । यसले महामारीसँगको लडाइँ कुनै...
भन्सार छलेर ल्याएको बिँडी बैतडीमा बरामद
प्रदेश ७ राजधानी समाचारदाता - June 30, 2020 0
बैतडी । भन्सार छलेर ल्याएको बिँडी बैतडी प्रहरीले बरामद गरेको छ । भन्सार छलेर ल्याएको बिँडी लुकाईराखेको अवस्थामा हिजो गोठलापानी बजार क्षेत्रबाट बरामद गरिएको...
बन्दले सप्तरीको जनजीवन कष्टकर
प्रदेश २ राजधानी समाचारदाता - February 4, 2021 0
सप्तरी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा सरकारले संविधानलाई वेवास्ता गर्दै संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेको भन्दै त्यसको बिरोधमा आहवान गरेको आम हड्तालका कारण...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - December 27, 2020 0
राजनीति राजधानी समाचारदाता - May 9, 2021 0
एकै दिन ९०७० मा काेराेना संक्रमण पुष्टि
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 6, 2021 0
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा ९०७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २० हजार ३६७ पीसीआर परीक्षणमा ८९७०...
सञ्जीब दुलाल - May 6, 2021
पूर्णभक्त दुवाल - May 10, 2021